Global Voices teny Malagasy » Kazakhstan: Politika sy fiaraha-monina ao anatin’ny fotoanan’ny Krizy · Global Voices teny Malagasy » Print
Kazakhstan: Politika sy fiaraha-monina ao anatin’ny fotoanan’ny Krizy
Voadika ny 24 Febroary 2009 14:07 GMT 1	 · Mpanoratra Adil Nurmakov Nandika Koloina RAMASINANDRO
Sokajy: Kazakhstan, Politika, Toekarena sy Fandraharahàna
Mijanona ho lohahevitra lehibe ao amin’ny ady hevitra an-terineto ao Kazakhstana ny Politika – matetika loatra izany sady mafy kokoa nohon’ireo hita mivantana eny amin’ny fiananam-bahoaka. Ny iray amin’ny trangan-javatra vao haingana indrindra izay ifampiresahan’ireo mpitoraka blaogy dia ny fametrahana ny mari-pankasitrahana ho an’ny faritra vaovao – io no anarana omena ny mpiasa mendrik’i Kazakhstana (mitovy endrika amin’ny mpiasa sosialista mendrika ao amin’ny Firaisana Sovietika). Manoratra i Neruad, singa iray ara-pakanjakana mivohy fampielezan-kevitra manohana ny fanomezana ny anarana ny Filohan’ny Kazakhstana ho mpiasa mendrika [ru]:
Ny fombafomba misolelaka dia efa nanomboka sahady manerana ny firenena, mazava ho azy fa tsy maintsy misy izany, ary vita lamina amin’ny alalan’ireo mpitondra ara-panjakana ambony. Mifaninana ny governora hoe iza no mahay misoleleka indrindra.
Nampiseho ny fahalalana raitra mahakasika ny PR sy ny fihainoana ny vianavinan’ny vahoaka indray kosa anefa ny Filoha – Nisaotra ny vahoaka izy noho ny fanomezana anarana azy saingy nanda ny handray ny mari-pankasitrahana izy. Eo ihany koa fa niala an-daharana ireo mety ho tombotsoa ny parilemantera. Notaterin’ireo birao vaovao fa mandanjalanja sy mamehy ny vola lany amin’ny taona 2009 ny volavolan-dalana tapaka entina miady ny krizy. Mitsikera  I M-kaa [ru]:
Hita mibaribary tsikelikely mihoatran’ny azo tsapain-tanana ny fialana an-daharana ho amin’ireo tombotsoa tokony ho azo ireo – vola mitentina ho 160 tapitrisa trenge no sisa tavela, ambiny tamin’ity taona ity, miampy vola mitentina 1.300 tapitrisa trenge ho an’ny fandaniam-bola amin’ny herintaona. Ny MP (Mpikambana ao amin’ny Parlemanta) dia tsy hanana dia aleha momba ny fandraharahana any ivelany (raha tsy hoe angaha nohon’ny fahamaizana), tsy hahazo fiara vaovao ihany koa, na fanaka na solosaina. Ny toeram-piantsonan’ny fiara (parking) sy ny fitaovam-pifandraisana sy serasera ho an’ny parilemanta kosa no havaozina isantaona izay avy amin’ny tenti-bidin’ny fiara 60 sy solosaina an-jatony izay tokony vidina isan-taona! Mahantra kely inareo ry solombavam-bahoaka, amin’ny fomba ahoana no hiasan’izy ireo…
Etsy andaniny, tsy mazava mihintsy ny fisehon’ny toe-karena Kazakhstaniana – Manda ny fisian’ny krizy ara-toe-karena eo amin’ny firenena ny governemanta, fa kosa ny rafitra miady amin’ny krizy dia efa napetraka. Mitandrina be ihany ny mpitondra fanjakana ny amin’ny fomba fihetsika sy fiteny – Mety midika ho teny mamoafady ny teny hoe “krizy”. Nalefan’I Cherry-eye ny bolongana misy ny bankin’ny Kazakh mitazona ny sarin-dokam-barotra ratsy endrika tao Moscow (BTA Bank izay miray antoka amina orinasa madinika ao amin’ny firenena CIS [faritany mizaka-tena repoblikana]). Mivaky toy izao ny soratra eny amin’ny tabilaobe an-dalana: “Ekenao fa ny krizy tsisy tahotra dia hanary ilay endriny fotsiny ihany – Tsisy ahiahy ny fametraham-bola”. Miteny  ny mpitoraka bolongana [ru]:
Mba manaja e! Angamba aloha, tsy hisy ny faniriana hametraka ny volany iray manontolo any amin’ny banky BTA raha izao dieny izao, fa kosa mahafianritra ihany ny vazivazy madinika. Manontany tena aho hoe fa maninona ny banky no tsy mampiasa io sarin-dokam-barotra io ao Kazakhstana? Miadana ve ny fandrosoan’ny vahoaka, sa ve voasakana ny fanaovana izany ety?
Mizara  ny fijeriny mikasika ny fiverenany ao Kazakhstan I Dorovskih, mponina Almaty teo aloha izay mipetraka ao Etazonia ankehitriny [ru]:
Tsy miova I Almaty – ny loza fotsiny dia vitsy ny olona no mitsikitsiky sy mifaly amin’ny fiainan’izy ireo. Ny fifamohivoizana no mampatsiahy azy ny fifaninana hazakaza-tsobika fahiny tamin’ny andron’ny fahazazana, ary ny habetsahan’ny fiara Land Cruiser sy ny BMW X6 ho avo telo heny be izao dia ambony lavitra noho ny hamaron’ny fiara lafo vidy ao Houston. Ny “fahamarinan-toerana” dia eo manodidian anao eo ihany: hita eny rehetra eny ny mpitandron’ny filaminana (polisy) ary mbola resy lahatra ny vahoaka amin’ny zo ananana sy ny taratasy ara-panjakana.
Manodidina izany rehetra izany, manampy vazivazy hafa mikasika ity resaka I Megashuimyak, izay mibanjina indrindra amin’ny olana nahatonga ny krizy ho tonga eny amin’ny feon-gazety. Miteny ny olona sasany fa ny tsy fahampian’ny vola no mahatonga ny famatsiana hivily lalana miala amin’ny dokam-barotra lafo dia lafo ao amin’ny televiziona ,ao amin’ny gazety ary ny eny amin’ny tabilaobe an-dalana, eny fa hatreny amin’ny dokam-barotra anterineto mihintsy aza.
Diso ry zareo – lasa mandeha eny an-dalana sy mandoko rindrina ny mpanao dokam-barotra! Mora kokoa ny vidiny, tena mahomby ary dokam-barotra amin’ny fomba vaovao. Mandehana mitady zatovo lahy amoron-dalana miaraka amin’ny ranon-doko “aerosol spray” dia ho fantatry ny mpiray tanana rehetra mora fotsiny ianao!
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2009/02/24/1664/
 Manoratra : http://neruad.livejournal.com/
 manampy : http://megakhuimyak.livejournal.com/557427.html